PressReader - Ilanga: 2017-08-31 - Uthishanhloko "ungqimuze" abafundi odongeni
Uthishanhloko "ungqimuze" abafundi odongeni
Usolwa ngokubavala ukuthenga komama badayisele yena
Ilanga - 2017-08-31 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
KUQUBUKE izinsolo ezihlasimulisayo zokungqutshuzwa ezindongeni kwabafundi bafunjwe ngempama nguthishanhloko waseNtabende Primary School, eMsinga, maphakathi neKwaZuluNatal.
ILANGA lipotshozelwe ngabanye abazali bezingane ezifunda kulesi sikole ukuthi uthishanhloko, uNkk Welisiwe Mchunu, ushaye abafundi ngoba ecasulwa wukuthi bathenga komama abadayisa ngaphandle kwamagceke esikole - ubayekisile ukwenza lokho.
Laba bazali bathi izingane zibuye esikoleni zababikela ukuthi uNkk Mchunu wenze lokhu ngoba ethi izingane kazizwa njengoba ziqhubeka nokuthenga ngaphandle. Umzali okhulume naleli phephandaba - ocele ukuba igama lakhe ligodlwe - uthe: “Kakuzange kungiphathe kahle ukuthi izingane sezingaze zishaywe ngezimpama, zingqinyuzwe odongeni ngoba zithenge komama abadayisa ngaphandle.
"Ngenxa yokuthi kangihlali ngasekhaya lapho kufunda khona ingane, ngimshayelile ucingo uthishanhloko waphika wathi akayazi leyo nto kodwa ingane yona ibisingishayelile ucingo yangitshela,” kusho lo mzali. Uthi uNkk Mchunu ucele ukuba afike esikoleni ukuze bezoxoxa kodwa yena wangakwazi.
Kakuyena yedwa lo mzali onalezi zinsolo ngoNkk Mchunu, omama abadayisa ngaphandle bathi bazibonele ngawabo eshaya abafundi. Bakhala ngokuthi ubephuca isinkwa ngoku- vala izingane ukuba zithenge kubona ngoba zidayisela yena.
UNkz Nomusa Ngubane - ongomunye wabadayisa ngaphandle - uthe usenesikhathi eside edayisa kulesi sikole okuthe ngemuva kwamaholidi kaNhlangulana (June), kwafika abanye besifazane ababili abebeyodayisa nabo. Uthi badayisela ngaphandle kwesikole ngoba vele kabavumelekile ukudayisela ngaphakathi.
Kuye kuthi uma izingane zisekhefini ziyothenga kubona. “Nathi yiyona ndlela esiziphilisa ngayo lena manje usesiphuca isinkwa. Siyahlala size silinde kuphume isikole izingane bese ziyathenga uma sezigoduka ngoba zesaba ukuthi zizoshaywa nguthishanhloko.
"Zikhona nje nezibuya zizositshela ukuthi zesaba ukushaywa, yingakho zingathengi,” kusho yena.
UNkz Ngubane nozakwabo, bathi okubaphathe kabi wukuthi uNkk Mchunu wenza lokhu ngoba efuna ukuba izingane zida- yisele yena.
“Ukudayisa kwethu lapha ngaphandle kakuphazamisi muntu kodwa yena uthumela izingane ukuba zizosixosha athi kasivumelekile nhlobo ukudayisa, okuyinto esingaqondi ukuthi uyenza kanjani," kusho uNkz Ngubane.
UNkk Mchunu uthi kungamampunge ukuthi ushaya abafundi. “Okokuqala nje kasisavumelekile ukushaya izingane esikoleni, kudala umnyango wezemfundo wakuvala lokho. Okokuthi ngibavalile ukuthi laba abadayisayo badayise, kuliqiniso ngoba kwavunyelwana ukuthi bangabe besadayisela abafundi ngoba sizama ukuqoqa imali, siqoqela sona isikole.
"Abazali batshelwa ukuthi kakusavumelekile ukuba kube nabantu abazodayisa lapha ngaphandle,” kusho yena.
Uthe akaqondi ukuthi kungani laba abanenkinga naye bangayi kuyena bayokhuluma ngalolu daba. “Ukhona umzali ongifonelile engibuza ngokushaywa kwengane yakhe, ngamtshela ukuthi kakulona iqiniso lelo.
"Ngimtshelile futhi ukuthi makafike sikhulume ubuso nobuso, wangafika. Kunomoya wokudicilela phansi isithunzi sami nje,” kusho yena.
UMnu Kwazi Mthethwa okhulumela uNgqongqoshe wezeMfundo KwaZulu-Natal, uthe okwabo wukuqinisekisa ukuthi izindawo zokufunda ziphephile.
“Lezo zinsolo zokushaywa kwezingane kasihambisani nhlobo nazo, sizoqinisekisa ukuthi siyalulandela lolu daba ngokuphenyisisa ukuze sithole ukuthi kwenzeka- ni. Siyabanxusa othisha ukuba bangasebenzisi isikole njengezindawo zokwenza amabhizinisi, mabenze umsebenzi wabo. Siyabanxusa ukuba bayeke ukuba ngabashayisibhakela njengoMike Tyson, kepha benze indawo yokufunda iphephe.
"Uma kuliqiniso ukuthi izingane zishayiwe, sizokuthola lokho, okuzobe kusho ukuthi othintekayo usezixoshe yena uma ekwenzile lokho,” kusho uMnu Mthethwa.